KRK Limited Edition ROKIT G4 “White Noise” Monitors Now Available – NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » KRK Limited Edition ROKIT G4“ White Noise” စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါသည်
KRK Limited Edition ROKIT G4“ White Noise” စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ပါသည်
Nashville, ဒီဇင်ဘာ 2, 2019 - KRK စနစ်များGibson တံဆိပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်စတူဒီယိုမော်နီတာအသစ်တစ်ခုကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် ROKIT Generation4(G4) အကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ ROKIT G4 အဖြူရောင်ဆူညံသံ။ 5-, 7- နှင့် 8 လက်မ bi-amp မော်ဒယ်များတွင်ရရှိနိုင်သည့်ဤစတိုင်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသောမော်နီတာများသည်အသစ်ထုတ်လွှတ်ထားသော ROKIT G4s နှင့်အတူတူပင်အထင်ကြီးဖွယ်လက္ခဏာများရှိသည်။ အနုပညာနှင့်သိပ္ပံပညာသည်ဤပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်နီတာများ၏ White Noise ထုတ်ဝေမှုအသစ်များနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးဂီတနှင့်အသံဖန်တီးမှုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်အသစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းသောနှင့်တက်ကြွသောနားထောင်ခြင်းဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်များနှင့်အတူ KRK ၏ ROKIT G4 စတူဒီယိုမော်နီတာများကိုသိပ္ပံပညာဖြင့်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးမြေပြင်မှပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာခေတ်သစ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နဲ့ကိုက်ညီပြီးအမျိုးအစားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးမှာပါ။ ROKIT G4 အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးသည်စတူဒီယိုမော်နီတာတွင်အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်စတူဒီယိုမော်နီတာတွင် DSP- မောင်းနှင်သော Graphic EQ နှင့် 25 ဆက်တင်များပါ ၀ င်သည်။ စတူဒီယိုမော်နီတာတွင် DSP- ပြသရန်၎င်းတို့စာသင်ခန်းတစ်ခုတည်းသောမော်နီတာများကိုပြုလုပ်သည်။ မောင်းနှင် EQ setting များကို။ Flat setting သည်ပတ် ၀ န်းကျင်အများစုအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ကွဲပြားသောအသံပတ်ဝန်းကျင်ရှိဘုံပြtroubleနာများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်အနိမ့်၊ အလယ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်ကြိုတင်ညှိခြင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤ on-board စနစ်သည် Android နှင့် iOS စတိုးများ၌အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့် KRK Audio Tools App နှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်သည်။
ထို့အပြင် ROKIT G4 မော်နီတာများ၏ system element များအားလုံးကို Kevlar ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသူတို့၏အဆင့်မြင့်မောင်းနှင်သူများနှင့်အတူတကွဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးအင်ဂျင်နီယာများပြုလုပ်ထားသည်။®စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် Class D ပါဝါချဲ့စက်များနှင့်ရှေ့တွင်ပစ်ခတ်နိုင်သောဆိပ်ကမ်းသည်အထူးနိမ့်ကျသောတိုးချဲ့ခြင်း၊ ထိုးနှက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအခန်းနေရာချထားခြင်းများကိုပေးသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် စုပေါင်း၍ တိကျခိုင်မာသောဘေ့စ်ပြန်ထုတ်ခြင်းနှင့်နားထောင်ခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်အသံတည်ကြည်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးအလုံးစုံမျှတသောနားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
“ ROKIT G4s နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တုန့်ပြန်ချက်တွေရလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုးချဲ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်” ဟု Gibson Brands, Inc. မှကမ္ဘာ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာဂျင်မီ R. လန်ဒီကပြောကြားသည်။ စတူဒီယိုပတ် ၀ န်းကျင် - တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတယ် G4 အကွာအဝေးအသစ်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စွယ်စုံသုံးနိုင်သောစပီကာစနစ်ဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းစတူဒီယိုများကိုပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တေးဂီတဖန်တီးမှုပတ်ဝန်းကျင်သို့ပြောင်းလဲရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ”
ROKIT G4 အကွာအဝေးတွင်အနည်းငယ်မျှသာပုံပျက်ခြင်းနှင့်အသံအရောင်ပြောင်းခြင်းတို့အတွက်စနစ်ကျစွာဒီဇိုင်းနိမ့်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအဖုံးများနှင့်မြင့်မားသောကြည်လင်ပြတ်သားမှုအတွက်တုန်ခါမှုကိုလျှော့ချပေးသောမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ acoustic ISO foam pad ပါရှိသည်။ ထို့အပြင် G4 မော်ဒယ်များအားလုံးသည်ဒီဇိုင်းအသစ်ထည့်သွင်းထားသောအုတ်နံရံကန့်သတ်ချက်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်မျှတသောအသံကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ စနစ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဒိုင်းနမစ်ကိုအမြင့်ဆုံး amp-level တွင်အလိုအလျောက်ထိတွေ့စေသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်လည်ပတ်: www.itisrokitscience.com.
Gibson အမှတ်တံဆိပ်, ကမ္ဘာ့အများဆုံးအထင်ကရဂစ်တာအမှတ်တံဆိပ်ထက်ပို 100 နှစ်ပေါင်းအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးဂီတသမားများနှင့်ဂီတချစ်သူများ၏သားစဉ်မြေးဆက်၏အသံ shaped သိရသည်။ 1894 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် Nashville, TN အတွက်ရုံးချုပ်, Gibson အမှတ်တံဆိပ်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်ရာလက်, ဒဏ္ဍာရီဂီတမိတ်ဖက်များနှင့်ဂီတတူရိယာကုမ္ပဏီများမှကြားတွင် unrivaled ကြောင်းတိုးတက်သောထုတ်ကုန်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအမွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Gibson အမှတ်တံဆိပ်အစုစုကို Gibson တို့ပါဝင်သည်, Epiphone, Kramer, Steinberg နှင့် Gibson Pro ကိုပေး Audio ဌာနခွဲအပါအဝင်အရေအတွက်ကတဦးတည်းဂစ်တာအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်နှင့်မှတ်မိဂီတအမှတ်တံဆိပ်များစွာကို, Cerwin Vegas, KRK စနစ်များနှင့် Stanton တို့အမှတ်တံဆိပ်။ လာစဉ်မြေးဆက်များအတွက်ဂီတချစ်သူများ Gibson အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်ပုံဖော်ဂီတကိုခံစားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် Gibson အမှတ်တံဆိပ်အရည်အသွေး, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် sound ထူးချွန်ထံအပ်နှံသည်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.gibson.com ငါတို့ကိုအပေါ်ကိုလိုက်နာ တွစ်တာ, Facebook က နှင့် Instagram ကို.
Gibson Gibson Pro ကိုအသံ KRK ROKIT G4 အဖြူရောင်ဆူညံသံ KRK စနစ်များ အရေအတွက်ကန့်သတ်ထုတ်ဝေခြင်း လှံ & Arrows စတူဒီယိုမော်နီတာ	2019-12-02
ယခင်: DPA ၏အသစ် 4560 CORE Binaural နားကြပ်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကြည်လင်သောအသံဖမ်းယူမှုကိုရိုးရှင်းစေသည်
နောက်တစ်ခု: ဂီတ / ဖက်ရှင်တံဆိပ် (Luxury Apt Incl) တွင် Anime Illustrator အလုပ်သင်